DLULA U-Iris Tornado F-3 FSX & P3D - Rikoooo
Play 21 482
Umbhali: IRIS Flight Simulation Software
Uhlobo olulungisiwe lweTornado F.3 kusuka ku-IRIS Simulation, imisindo emisha, ukulungiswa kwe-VC nokunye okuningi kwenziwe ngcono (bona i-Readme). Ukungeza imiphumela ye-afterburner, i-adaptation ye Prepar3D v2 +. Sebenzisa izinkinobho zezithonga ukusabalalisa / ukukhipha izimpiko zejometri eziguquguqukayo. Kuhlinzekwa ngobuningi bezinto zokubuyisa nezinguqulo ezihlomile (amabhomu, imicibisholo, njll.)
Panavia Tornado ADV indiza a British yesikhathi eside twin-engine Interceptor, Panavia Tornado kanye version. Ngaphambi March 2011, lo Tornado ADV wakhonza-Royal Air Force lapho kwaba umsebenzisi esemqoka yalolu hlobo fighter.
I-A-7E / H Corsair Hellenic Air Force FSX
U-Iris Phantom AS-GA Megapack FSX & P3D + kwamaphutha
I-Dassault Mirage F1 Mega Pack FSX & P3D II
I-Eurofighter iSiphepho i-AlphaSim FSX & P3D